आज २०७७ मंसिर ११ गते बिहीवारको राशिफल – AB Sansar
November 26, 2020 November 26, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on आज २०७७ मंसिर ११ गते बिहीवारको राशिफल
आज २०७७ मंसिर ११ गते बिहीवार । ज्यो`तिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भ`वि`ष्य`वा`णी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
अनुहार कान्ती र मनमा शान्ती छाउनेछ । बोलीको विपरीत अर्थ लाग्न सक्छ, बोल्नअघि धेरै सोचविचार गर्नुहोला । चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपरे पनि बुद्धि–विवेकले काम गर्न सकिनेछ। अ`प्ठ्या`रा परिस्थितिसँग स`म्झौ`ता गर्नु परे पनि आत्मविश्वास, मिहिनेत र लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्‍याउनेछ । अध्ययन अध्यापन राम्रै हुनेछ । पारिवारिक सद्भाव बढ्नेछ । यात्रामा सा`ब`धा`नी अपनाउनु होला ।
नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ । धन आर्जनका स्रोत फेला पर्नेछ । बेसुरमा दिइएको वचनले अप्ठ्यारो पर्नेछ । शरीरमा उत्साह र उमङ्ग प्राप्त हुनेछ । स्वास्थ्य सबल रहनेछ र काममा पनि फाइदाको योग छ । चिताएको काममा सोचेजस्तै सफलता मिल्नेछ। प्रे`म र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। व्यवसायको लगानीले मनग्गे धन`लाभ हुनेछ। आलस्य त्यागेर मिहिनेत गर्नुपर्ने समय छ। प्रतिस्पर्धीहरूले समेत सहयोगका हात फैलाउनेछन्। नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ।
मन उत्ताउलो हुन सक्छ । रतिराग बढाउने समय छ । विपरित वर्गसँगको आकर्षण बढ्नेछ । कल्पना र भावनामा केन्द्रित भइने छ । सम्पूर्ण उद्यम र परिश्रमको राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । आफ्नो क्षेत्रमा प्र`भु`त्व जमाउँदै दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। तर अवसरका लागि विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला । शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। विशिष्ट व्यक्ति भेट्ने अवसर जुट्नेछ। प्रेम सम्बन्ध सफल रहनेछ ।
भौतिक साधन जोड्ने समय छ। आगन्तुकहरूको उपहारले प्रसन्नता मिल्नेछ । कामको चाप बढ्नेछ । मेहनतले अवसर दिलाउनुका साथै दैनिकीमा परिवर्तन आउनेछ। पहिलेको सफलताले उत्साह जगाउनेछ। नयाँ काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ । पढाइमा पनि राम्रै प्रगति हुनेछ । आर्थिक पक्ष सबल छ । आ`क`स्मि`क खर्चले अर्थ अभाव भने देखा पर्न सक्छ।
नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ । आर्थिक लाभ प्राप्त होला । ठूलाबडाको आशीर्वादले रोकिएको काम बन्नसक्छ । मेहनतले पदीय जिम्मेवारी दिलाउनेछ । विशेष अवसर प्राप्त हुनाले मन प्रफुल्लित हुनेछ। टाढिएका साथीभाइ नजिकिनाले हर्ष बढ्नेछ। भाग्यले विभिन्न अवसर थमाउनेछ। अध्यात्मभाव जागृत हुनाले परोपकारमा मन जानेछ। धेरैले कामको तारिफ गर्नेछन्। शुभचिन्तकहरूले साथ दिनाले पहिलेको चु`नौ`ती समाप्त होला। दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ।
हाँसखेल र मनोरञ्जनपूर्ण समय छ । पारिवारिक सुख मिल्नुका साथै अध्ययन-अध्यापनको क्षेत्रमा प्रगतिको खबर सुन्न पाउनु हुनेछ । लगानी बढाउनु परे पनि व्यवसाय था`ल`नी हुनेछ । प्रेमको बन्धन कसिनेछ। सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता ल्याउनेछ । अतिथिका रूपमा सत्कार पाइनेछ । विवादास्पद जिम्मेवारी पनि वहन गर्नु पर्ने हुन सक्छ ।
घरपरिवारको साथ सहयोग पाउन मुस्किल हुनेछ । आर्थिक पक्ष ठीकै भए पनि मानसिक चिन्ता बढ्न सक्नेछ । स्वास्थ्य सुधारोन्मुख हुनेछ । मु`द्दा मामिलाको झ`न्झ`ट आइलाग्ला । काम विगार्नेहरू सक्रिय हुनेछन् । उत्तरार्धपछि भने सकारात्मक समाचार सुन्न पाइएला ।
आफन्तबाट टाढिनुपर्ला । व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। लाभप्रद कामले लो`भ्या`ए पनि फजुल खर्च हुन सक्छ। अवसरका लागि क`डा परिश्रम गर्नुपर्ला। देश–विदेशको यात्रा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । छर–छिमेकमा असमझदारी देखिनेछ भने बेसुरको काममा अलमलिनुपर्ला। स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्ने देखिन्छ ।
शरीर आलश्य हुनेछ । स्वास्थ्यमा स`म`स्या आउन सक्छ । खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुहोला । धाती तथा टाउको सम्बन्धी समस्याले सताउन सक्छ । साथीभाईको सहयोग रहे पनि आम्दानीले खर्च धान्न मुस्किल पर्छ । रोकिएका कामहरू अघि बढ्ने योजना बन्नेछन् । प्रेम सम्बन्ध राम्रो हुनेछ । शैक्षिक क्षेत्र मध्यम नै हुनेछ ।
साथीभाइको विशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ। झिनामसिना समस्याले सताइरहने छ । पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट भने राम्रो लाभ मिल्ने योग छ । प्र`ति`ष्ठि`त काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । दिन उत्साहपूर्ण रहनेछ । व्यापारमा सामान्य फाइदा भए पनि पशुपालन र कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ हुनेछ । मुद्दा मामिलामा सफलता हात पर्ला ।
हाकिम, मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिको विचारले प्रभावित तुल्याउन सक्छ । नोकरी अथवा व्यवसायसँग सम्बद्ध कुनै ठोस परिणाम देखा पर्नेछन् । नयाँ योजना प्रारम्भ गर्न सकिनेछ । आयआर्जनका विविध स्रोत फेला पर्नेछन्। तर श्रमको उचित मूल्यांकन भए पनि प्रतिफलका लागि समय पर्खनुपर्नेछ। आँटेको कामको लगानी पनि अरूका लागि खर्च हुन सक्छ। पती पत्नीबीचको सम्बन्धमा ख`ट`प`ट हुन सक्छ ।
August 30, 2021 Ab-संसार
September 22, 2020 September 22, 2020 Ab-संसार